HomeDharmaLakshmi God : यी ४ राशिका मानिसमा सधैँ रहन्छ माता लक्ष्मीको आशिर्वाद...
Lakshmi God: ज्योतिष अनुसार १२ राशि मध्य केहि राशि छन् जुन राशिका मानिस धेरै भाग्यशाली हुन्छन्। यी भाग्यशाली राशिमा सँधै माता लक्ष्मीको आशिष रहिरहन्छ। जसका कारण यी राशिका मानिसहरुको जीवनमा धन तथा मान-सम्मानको अभाव कहिल्यै हुँदैन। जान्नुहोस् यी राशिको बारेमा…
Lakshmi God’s blessings on वृष राशि
Lakshmi God’s blessings on सिंह राशि
See also श्रीमानलाई असाध्यै माया गर्छन यी ४ राशीका श्रीमती, तपाईको कुन ?
Previous articleSunita Dangol: चुनाव जिते महिलालाई महिनावारी हुँदा बिदा दिने नीति बनाउँछुु
Next articleऋणको बोझले हैरान हुनुहुन्छ ? यी ७ सजिलो उपायले राहत दिन्छ